အောင်သက်ဝိုင်း| August 16, 2012 | Hits:12,104
18 | | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) မှ ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ တထောင်ကျော်၏ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလွှာများအား သြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တင်ပြတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မတရားမှုများ ကြုံနေရသော်လည်း NLD ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည်
မနန်းဝိုးဖန်၏ခင်ပွန်း ဂျပန်နိုင်ငံသားကို စသုံးလုံးဖမ်း
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment sunny August 16, 2012 - 12:37 pm	There are too many people like him in myanmar governent. Thus in order to be clean government, Thein Sein need to remove those people. The sooner, the better.